Sida loo xakameeyo HomeKit oo leh astaamaha NFC | Wararka IPhone
Sida loo xakameeyo HomeKit oo leh astaamaha NFC
Luis Padilla | | HomeKit, macruufka 13, Casharrada iyo buugaagta
IOS 13 waxay na siisaa fursado badan oo cusub, midkoodna wuxuu awoodaa inuu xakameeyo aaladaha HomeKit annaga oo isticmaaleyna sumadaha NFC. Istiikaaradaan waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo aan dhammaad lahayn, iyo si fudud anagoo u soo dhoweyneyna taleefankeena iPhone-ka ah iyaga ayaynu ka heli karnaa nalalkayaga inay damiyaan, Muusiggu ha ka dhex ciyaaro qolkeenna fadhiga ama wax kasta oo aan ka fekeri karno oo la xiriira demotics-ka gurigeenna.
Thanks to qaar ka mid ah sumadaha NFC ee fudud, iPhone-geena iyo arjiyadaha Tilmaamaha waxaad ka heli kartaa waxa aan kuugu muujiyo fiidiyaha iyo inbadan. Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato iPhone-kaaga iyo qalabkaaga 'HomeKit', fiidiyowga waxaan ku sharraxeynaa tallaabo tallaabo ah sida loo qaabeeyo ficiladan.
Astaamaha NFC waxay u eg yihiin istiikarada fudud, laakiin waxay ku jiraan qashin gudaha ku siinaya awoodo gaar ah. Muddo dheer IPhone-ka waxaa ku jiray akhristaha NFC laakiin wuu xirnaa loomana adeegsan karo wax aan Apple Pay ahayn. Laga soo bilaabo macruufka 13 waxaan ka faa'iideysan karnaa akhristahaas si aan uga faa'iideysano oo aan awood ugu yeelano inaan abuurno ficilkeenna u gaarka ah astaamaha NFC. Waxaan ka iibsan karnaa istiikaradaan Amazon lacag yar (isku xirka) waxaanan leenahay noocyo kala duwan oo naqshado iyo midabbo isugu jira. Uma baahna inay lahaadaan nooc kasta oo qeexitaan gaar ah oo la jaan qaada iPhone-keena. Dhamaan iphone-yada ka socda XR iyo XS waxay leeyihiin awood ay ku aqriyaan kaararkaas wadan ahaan. Moodooyinka duugga ahi waxay u baahan doonaan codsi akhriya astaamaha NFC, sida Launch Center Pro (isku xirka).
Mid ka mid ah aan haysano istiikarada, iyada oo loo marayo iPhone-keena iyo arjiga «Shortcuts» Waxaan abuuri karnaa qalab otomaatig ah noocyadiisa kala duwan oo aan ku shaqeyn karno innagoo u soo dhoweyneyna iPhone-keena astaamaha NFC ee aan u qaabeynay. Shuruudda kaliya ee jirta ayaa ah in iPhone-keena uu noqdo mid furan, haddii kale, ma fulin doono wax talaabo ah. Qalabka «Shortcuts» wuxuu na siinayaa ikhtiyaarro fara badan, sida abuurista xaalado, habeynta ficilada iyadoo la raacayo taariikhda bisha ama maalinta usbuuca, iwm. Waa qalab aad u awood badan oo mudan in daqiiqado lagu qaato si loo xaqiijiyo waxa ay ina siiso oo dhan. Fiidiyowga waxaan ku sharraxeynaa sida wax walba loo sameeyo tusaale aad u fudud oo kuu oggolaanaya inaad fikrad ka hesho waxa aad sameyn karto. Ma rabtaa inaad wadaagto fikradahaaga? Waa hagaag, faallooyinka waxaad leedahay meel sax ah oo aad ku sameyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Sida loo xakameeyo HomeKit oo leh astaamaha NFC
Waa maxay nooca? Beta maaha beta 13.2
NFC kama muuqato 13.2
Ku jawaab Justan
Waxaan ku cusbooneysiiyey macluumaadka ra'yigaaga. Sida muuqata kaliya iPhone XR iyo XS wixii ka dambeeya ayaa wadan ahaan sameyn kara. IPhones hore waxay ubaahan yihiin barnaamij Launch Center Pro.
Nooca ugu dambeeya ee iOS waxaad ku fududeyneysaa talaabooyinka aad ku ciyaareyso HomePod tan iyo markii HomePod loo shaqeysiiyay qalab ahaan oo aan loo baahnayn in la isticmaalo AirPlay.
Hal su'aal: warqaddu maxay ku habboon tahay Iphone kale? Tusaale ahaan tan xaaskeyga? Waxaan ula jeedaa haddii aan u qaabeeyo inay shidato nalka qolka fadhiga, haddii ay xaaskeygu soo dhoweyso taleefankeeda, nalka sidoo kale ma daarayaa?
Waa inaad ku abuurtaa isla otomaatiga taleefankaaga iPhone-ka
Aad baad u mahadsantahay! Salaan
Waad salaaman tihiin, la tashi. Haddii aad ka sameysato toobiye NFP warqad yar oo ka socota iPhone-ka, sidoo kale ma ku dhaqaajin kartaa adoo u soo dhoweynaya Apple Watch? Mahadsanid,
Jawaab Enrique R.
I Juan dijo
Tiknoolajiyad duug ah .. toy cusub oo loogu talagalay taageerayaasha iPhone
Ku jawaab Yo Juan
Waa salaaman tahay, waxaan haystaa iPhone 8 iyo qayb ka mid ah SHORTCUTS markii aan doonayo inaan mid otomatig sameeyo, ikhtiyaarka NFC uma muuqdo sidii inuu ka muuqanayo iPhone 11keyga .. ma inaan dhaqaajiyaa? qof garanayaa? Mahadsanid
Ku jawaab hugo rivera